Rakkoo Rohinigyaa: Gaambiyaan mana murtii UN'tti duguggaa sanyiin Mayanmaar himatte - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoo Rohinigyaa: Gaambiyaan mana murtii UN'tti duguggaa sanyiin Mayanmaar himatte
12 Sadaasa 2019
Afrikaa Lixaatti biyya xiqqoo kan taate Gaambiyaan mana murtii olaanaa UN'tti Mayanmaar, hawaasa Musliimaa Rohingiyaa irratti duguggaa sanyii gaggeesseera jechuun himanna dhiyeessite.
Himannaan kun Mana Murtii Haqaa Idil Addunyaa (ICJ), kan hojiin isaa waldhabee biyyoota lama gidduu furu ta'etti dhiyeeffame.
Gaambiyaan himanna kana ICJtti kan dhiyeessite Wiixata Hegiitti ture.
Biyyi harka caalaa Musliimaa taate kun dabalataan deeggarsa Dhaabbata Qindoomina Islaamaa (OIC) fi gartuu abuukaatoota idil addunyaa qabdi.
Biyyootiin lamaan Gaambiyaafi Maynamaar Waligaltee Dugugggaa Sanyii 1948 kan mallatteessan yoo ta'e, kun ammoo isaan yakka duguggaa sanyii ofii akka hin rawwannee kan dhorkuufi yakkicha akka adaban kan taasisudha.
Himannaa isaa kanaratti Gaambiyaan manni murtii kun Maynmaar hatattamaan "haleellaa fi duguggaa sanyii lammilee ofiishee Rohingiyaa irratti gaggeesittu" akka dhaabdu mirkaneessuuf dhorkii akka irra ka'uu gafateera.
Lammiin Ruwaandaa himmannaa duguuggaa sanyiin UStti hidhame
Mo Ibraahim ICCn himannaa Bashir irratti bane akka kaasuuf gaafate
Dursaan garee finciltootaa duraanii hidhaa waggaa 30n adabame
Ministiri Haqaafi Abbaan alangaa waligalaa Gaambiyaa Abuubakar M Tambadoo, himannaa kana dursaa jira. Kanaan dura duguggaa sanyii Ruwaandaa 1994 qorachuun Mana murtii Addaa Yakka Idil Addunyaa (ICT) keessaa hojjeechaa tureera.
Abuubakar M Tambadoo wiirtuu baqattoota Rohiingiyaa, Baangilaadhishitti argamu yeroo daawwatanitti seenaan ajjeechaa, gudeeddiifi dararaa baqattoota irra dhaga'an ejjeennoo akka fudhataniif isaan kakaasuu isaa ji'a darbe BBCtti dubbatanii turani.
Bara darbe, UN halleellaa Mayinmaar keessa jiru irraatti, hoggantoonni waraanaa duguggaa sanyiif himatamuu qabu jechun gabaasa dhiyeesse ture.
Mootummaan Mayanmaar yakkaa akkanaa looltonni isaa hin raawwanne jechuun haala.
Biyya irra guddan amantaa Budiisimii hordoftuu kanatti bara 2017tti haleellaa loltootaan gaggeefameen lammiileen Rohiingiyaa kumaatamaan ajjefamanii, gara 700,000 ta'an immoo gara biyya ollaa Baangilaadeshitti baqataniiru.
Bara darbe abbootiin alangaa Mana murtii Yakka Idil addunyaa (ICC) yakka Mayanmaar hawaasa musliimaa Rohingiyaa irratti rawatte jedhu irratti qorannoo jalqabe ture.
Mayanmaar ICC keessatti malleettesuu hafuun ishee garuu adeemsaa seeraa kana waan danqeef hanga ammatti himannaan baname hin jiru.
Hokkora tibbanaa keessatti qoodni miidiyaa akkam ture?
Ameerikaan haadha alangee ol-aantuu ICC viizaa dhowwatte
5 Elba 2019
Boskoo Nitagaandaa yakka waraanaa Koongootti raawateef hidhaa waggaa 30n adabame
Mo Ibraahim Manni Murtii Yakka Addunyaa himannaa Bashir irratti bane akka kaasuuf gaafate
Xiyyaarri namoota 38 qabattee balali'aa turte dhabamte
Lilmoon ulfa ittisu dhiiraaf yeroo jalqabaaf qophaa'e milkaa'aa laata?